Firy ny teny isaky ny paositra marina? | Martech Zone
Alakamisy 13, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Kudos ho an'i Indy Confluence amin'ny fametrahana a hetsika tambajotra mahafinaritra eto Indianapolis omaly. Tsy toy ny ankamaroan'ny hetsika amin'ny tambajotra, Indy Confluence tarihin'i Brett Healey sy Erik Deckers, nitondra antokon'olona iray eto amin'ny faritra mba hanome torohevitra ampiana lanja ho an'ny mpikambana rehetra ao aminy. Ny lohahevitra tamin'ity volana ity dia ny antony maha-zava-dehibe ny famahanam-bolongana orinasa amin'ny fahombiazan'ny orinasa iray ary nasaina ho eo amin'ny tontonana aho.
Ny tontonana dia i Chris Baggott, Rhoda Israelov, Rodger Johnson, Kyle Lacy sy izaho.
Dinika mahafinaritra be iny fa nisy lohahevitra iray nijanona tao anaty fandokoana: Firy ny teny tokony hananana lahatsoratra bilaogy?.
Ny resaka dia nandeha nanerana ny latabatra ary ny ankamaroan'ireo mpandahateny dia nanery ny pithy post ary ny isa 250 dia napetraka tao ho faratampony. Amin'ny maha bilaogera 'copie lava' iray ahy, dia novoizin'ny tontonana aho.
Ho an'ireo mpamaky ny bilaogiko, fantatrareo fa tsy afaka manangana lahatsoratra bilaogy amin'ny teny 250 aho (ohatra tsara ity lahatsoratra ity). Manana mpamaky iray taonina aho, fametrahana milina fikarohana lehibe ary mpihazakazaka marobe - ary tsy mamindra fo mihitsy aho! Nandinika ny isan'ny teny isaky ny lahatsoratra ary nampitaha azy mba hamoahana ny lazany amin'ny bilaogiko manokana ary tsy nahita fifandraisana mihitsy.
Tamin'ity indray mitoraka ity dia nanapa-kevitra ny hijery bilaogy hafa aho. Tsy ny bilaogy rehetra ihany anefa. Nisafidy ny valiny 5 ambony ao amin'ny Google aho rehefa nitady Mitoraka bilaogy ho an'ny SEO. Mihevitra aho na iza na iza amin'ny faran'ny ady farany izay hanana ny tsy fitovizany amin'ireo lahatsoratr'izy ireo izay mety hanome ahy fahitana vitsivitsy. Ireo bilaogy dimy nofakafakaina dia SEOmoz, SEO ho an'i Google, Blog Marketing amin'ny Internet, Hittail Blog, ary ny Blog SEO isan'andro.
Satria ireo bilaogy ireo dia misy valin'ny fikarohana be dia be, heveriko fa samy malaza sy misy ifandraisany ireo. Nosintomiko ireo bilaogy 10 farany isaky ny bilaogy ho an'ny totalin'ny bilaogy 50. Siansa izany, tsy misy, siantifika fa mino aho fa ny valiny dia mamerina ny zavatra notoheriko nandritra ny tontonana.
Valiny isaky ny lahatsoratra:
SEOmoz dia manana salan'isa 832.3 teny isaky ny lahatsoratra miaraka amin'ny mediana 512.5 teny isaky ny lahatsoratra.
SEO ho an'ny Google dia manana salan'isa 349.7 teny isaky ny lahatsoratra miaraka amin'ny mediana 315 teny isaky ny lahatsoratra.
Ny Top Rank Blogs dia manana salan'isa 742.5 isaky ny lahatsoratra miaraka amin'ny mediana 744 teny isaky ny lahatsoratra.
Hit Tail Blog dia manana salan'isa 255 teny isaky ny lahatsoratra miaraka amin'ny mediana 233 teny isaky ny lahatsoratra.
Daily SEO Blog dia manana salan'isa 450.8 teny isaky ny lahatsoratra miaraka amin'ny mediana 507 teny isaky ny lahatsoratra.
Ny valiny farany dia salanisa 526 teny isaky ny lahatsoratra ary mediana an'ny 447 teny isaky ny lahatsoratra. Amin'ireo lahatsoratra 50 norefesina (10 isaky ny bilaogy), ny 6 amin'izy ireo ihany no latsaky ny 250 teny. Taloha, noporofoiko fa ny haben'ny lahatsoratra dia tsy nisy fiatraikany tamin'ny mpamaky ny bilaogiko. Izao dia averiko indray, ny toro-hevitra omeko ho an'ny Words per Post dia izao:
Ny isan'ireo teny soratanao isaky ny lahatsoratra dia tokony ho isan'ny teny ilaina mba hamenoana ny tanjona fototra ananan'ny lahatsoratra. Ampiako ihany fa ny isan'ny teny isaky ny lahatsoratra dia tokony hitovy mifanaraka amin'ny fanantenan'ny mpamaky ankehitriny. Tsy manisa ny isan'ny teny aho - azoko antoka fa raha misy mahita ny lahatsoratry ny bilaogy avy amin'ny valin'ny motera fikarohana dia mahazo izay notadiaviny izy ireo.
Tags: isan'ny tenyvoatanisa ny teny
Ny maso dia manana fanamarinana tsipelina
13 Novambra 2008 à 1:09
Tena vaovao amiko izany vaovao izany. Nozaraiko ho lahatsoratra maromaro foana ny lohahevitra iray rehefa lehibe loatra ilay izy satria tsy tiako ho tototry ny horohoro mihodinkodina ny mpamaky ahy. Izaho manokana dia tsy tiako ny tranokala tsy maintsy ataoko midina be loatra. Na izany na tsy izany, vao avy nanolotra zavatra mahaliana ianao teto. Angamba, tokony hamita lohahevitra iray amin'ny lahatsoratra iray aho na dia mila teny mihoatra ny 2500 aza. Misaotra nandefa lahatsoratra mahaliana toy izany.
13 Novambra 2008 à 9:41
Raha manan-danja sy mendrika ny atiny, toa ny anao Doug, dia tsy zava-dehibe ny halavany. Amin'ny lafiny iray, raha miresaka fotsiny ny bilaogera mba handre ny tenany miteny (izay matetika no mitranga, indrisy), dia resaka hafa tanteraka izany!
13 Novambra 2008 à 10:06
Ny lahatsoratra bilaogy dia tokony hanana teny maro araka izay ilaina mba hampitana ny hevitrao.
Tsy misy holazaina? Tsy misy teboka = 0 teny
Angamba ny hany lazainao dia fehezanteny iray. Fa fehezanteny tena tsara! Mety hiafara amin'ny bokin'ny teny nalaina ianao, noho ny criminy!
Kitapo matavy be amin'ny rivotra, fa kitapom-drivotra mahaliana = soraty eo! Avelao hivoaka. Vent! Rant! Rave! Iza no miraharaha teny firy???? Raha mahatsara anao izany dia ataovy! (Ity dia ho an'ny bilaogera tsy matihanina kokoa.)
HAMAKY lahatsoratra lava ny olona RAHA matanjaka tsara ny eritreritra ka misintona azy ireo … raha ratsy ny soratra, tsy misy teny na tsy fahampian'ny teny mahavonjy ilay lahatsoratra.
Hoy i Nuff.
13 Novambra 2008 à 9:58
Moa ve ny lakile eto tsy votoaty fa tsy isan'ny teny? Raha manana votoaty tsara ianao, dia hifandray aminao ny olona ary hanome anao ny fahefana Google, na hitazona ny fifanakalozan-kevitra ho velona ao amin'ny fanehoan-kevitra ary hanome an'i Google ny fahatsapana fa havaozina tsy tapaka ny tranokalanao. Ary mora kokoa ny manana votoaty tsara amin'ny teny mihoatra ny 250. Sa misy zavatra tsy ampy ahy?
14 Novambra 2008 à 10:13
Ho an'ireo izay nibilaogy teo aloha, heveriko fa tsy misy atidoha izany ary ny votoatiny dia mpanjaka. Na izany aza, ho an'ny mpitoraka bilaogy na orinasa voalohany mieritreritra momba ny bilaogy, fanontaniana mipoitra tsy tapaka izany ka zava-dehibe ny mamaly azy.
13 Novambra 2008 à 10:04
"Ny isan'ny teny soratanao isaky ny lahatsoratra dia tokony ho ny isan'ny teny ilaina hamitana ny tanjona fototra"
Izany no torohevitra manan-tsaina indrindra novakiako momba ity lohahevitra ity.
(Mazava ho azy, amin'ny maha olona manoratra lahatsoratra lava be aho dia mitanila 🙂)
Ny mpamaky tsy tapaka ny bilaogiko dia milaza fa tiany ny fomba fanoratrako, ka tsy hanova izany aho satria misy ny milaza fa ny teny 250 no tokony ho ambony indrindra (izany koa dia mamela ny fifangaroana tsara amin'ny teny fanalahidy ho an'ny SE).
Feno fampahalalana tsara sy famakiana tsara ny hafatrao, ka eny, torohevitra tsara: aza manaraka 'ny fitsipika ekena'; mitadiava izay mety aminao ary atsaharo ny manisa ny teny 🙂
14 Novambra 2008 à 8:08
Niezaka mafy nanamafy an'io hevitra io aho rehefa niresaka momba ny lohahevitra tao amin'ny tontonana tao amin'ny Confluence. Manao izany miaraka amin'ny kilasy MORE ianao. 🙂
@Cynthia Tiako ny nilazanao hoe Vent, Rant, ary Rave. Ny lahatsoratra be mpamaky indrindra ao amin'ny bilaogiko dia rehefa mitabataba sy mitabataba zavatra aho. 🙂
14 Novambra 2008 à 10:16
Betsaka ny diso vaovao amin'ity indostria ity ary tsy misy olona manana ny bala majika! Mbola manome valim-pikarohana ratsy foana i Google indraindray ary amin'ny fotoana hafa dia maimbo aho amin'ny fanoratana lahatsoratra tsara.
Heveriko fa zava-dehibe ny hanesorana ny 'hevitra' amin'ny angon-drakitra sasany hanohanana azy! Mbola mianatra isika.
Mar 5, 2009 amin'ny 3: 39 AM
Torohevitra SEO tsara
Febroary 14, 2011 amin'ny 10:38 PM
Fampahalalana tena tsara! Misaotra anao nizara azy.
19 Oktobra 2011 à 8:59
19 Okt 2011 amin'ny 1:59 PM
19 Okt 2011 amin'ny 2:47 PM
Tsy misy toy ny fampiasana angon-drakitra mba hifehezana ny hevitra. Ny hevitro manokana momba ny lahatsoratra (bilaogy na hafa) dia "Mandresy ny fanoratana tsara!" Arakaraka ny tsara kokoa ny fanoratana (fitsipika, votoaty, fikorianan'ny fitantarana, sns.) no hamakiako azy.
Dec 2, 2011 amin'ny 1: 41 AM
Misaotra anao tamin'ity lahatsoratra ity satria niezaka ny hamantatra izany aho. Ny ankamaroan'ny lahatsoratro dia avy amin'ny teny 350 ka hatramin'ny 450 isaky ny lahatsoratra. Fantatro fa rehefa mandeha amin'ny bilaogy iray aho ary mihoatra ny 500 teny ilay lahatsoratra, dia tsidiho fotsiny ilay izy. Heveriko fa tsy dia tia mamaky bilaogy lava ny ankamaroan'ny olona. Miezaka mampita ny hevitro amin'ny teny latsaky ny 500 aho. Angamba diso aho. Na izany na tsy izany, ny eritreritro ihany. Sally
4 Desambra 2011 à 9:47
Ekeko tokoa fa tsy dia mamaky boky loatra ny olona. Mamporisika ny mpanjifanay izahay mba hampiasa teboka misy bala, sary tsara, ary sahisahy/fanantitrantitra na aiza na aiza ahafahany misambotra ireo 'skimmers'. Raha tsy miovaova ianao dia heveriko fa zava-dehibe kokoa izany… mba hahafahan'ny olona manantena zavatra mitovy isaky ny fitsidihana.
15 Desambra 2011 à 1:25
Tamin'ny volana lasa teo tamin'ny resaka nifanaovana tamin'ny namana maromaro notarihan'i Allison Carter sy Jeremy Zucker dia nanatsoaka hevitra fa ny isan'ny teny marina isaky ny lahatsoratra dia araka ny filazanao hoe, “Ny isan'ny teny ilaina mba hamitana ny tanjona fototra amin'ny lahatsoratra.”
May 7, 2012 ao amin'ny 3: 13 PM
Nitady laharana mahagaga aho, ary nahita ny valiny marina! Misaotra, matt
2 Jiona 2012 à 9:59
Ny isan'ny teny soratanao isaky ny lahatsoratra dia tokony ho ny isan'ny teny ilaina hamitana ny tanjona fototra amin'ny lahatsoratra.Teny.
May 1, 2013 ao amin'ny 2: 46 PM
Tena manampy tokoa izany. Misaotra anao. Ankehitriny dia tsy taitra aho raha tsy mahatratra 600 teny. Inona ny hevitra momba ny sary?
May 1, 2013 ao amin'ny 3: 35 PM
Manakiana ny sary! Tsy hanazava lohahevitra sarotra fotsiny fa hanampy amin'ny fisarihana ny mpamaky amin'ny atiny ary hanampy azy ireo hahatsiaro izany. -
9 Jiona 2013 à 8:58
Fampahalalana mahasoa tsara. Tsapako fa mihoatra ny 700 teny no hahatonga ny mpamaky ho very. Misaotra nanome ny antontan-taratasy.
Mar 13, 2014 amin'ny 4: 48 AM
Salama, lahatsoratra mahafinaritra, misaotra.
niova ve izany rehefa nandeha ny fotoana? mety hahaliana ny mahita angon-drakitra misimisy kokoa.
Mar 13, 2014 ao amin'ny 12: PM PM
Matoky aho fa manana izany, @mikemorrison1:disqus, na dia tsy niova firy aza ny soratako. Ny milina fikarohana dia mankasitraka kokoa ny lahatsoratra 'matevina kokoa' amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny karazana haino aman-jery maro, lahatsoratra bebe kokoa ary singa maro kokoa (lahatsoratra misy bala, lohatenikely, sns.)
May 16, 2014 ao amin'ny 2: 17 PM
Tsy misy fitsipika henjana sy haingana hoe ohatrinona ny teny isaky ny lahatsoratra dia mety. Izany dia miankina amin'ny lohahevitry ny lahatsoratra, ny habetsaky ny lahatsoratra tokony holazaina amin'ny antsipiriany. Ny lahatsoratra dia afaka manana sokajy samihafa toy ny lahatsoratra sasany dia kely, antonony ary lava rambony. Ny fenitra mitovy amin'izany dia voalaza ato amin'ity lahatsoratra ity fa ny seams dia manana teny 832.3 eo ho eo isaky ny lahatsoratra miaraka amin'ny median'ny teny 512.5 isaky ny lahatsoratra. Ny bilaogy tanky ambony dia manana teny 742.5 isaky ny lahatsoratra miaraka amin'ny median'ny teny 744 isaky ny lahatsoratra.
12 Okt 2014 amin'ny 12:57 PM
mbola misy vaovao ankehitriny ve izany?
12 Okt 2014 amin'ny 1:17 PM
Efa an-taonany maro no tsy namerina an'io famakafakana io fa mety ho tonga ny fotoana. Mino aho fa i Google dia mijery lavitra kokoa amin'ny pejy "matevina" misy teny maro isaky ny pejy noho ny taloha. Niovaova ny laharan'ny lahatahiry nandritra ny roa taona farany. Miezaka manana teny 250 fara fahakeliny izahay ary tena miezaka mamely teny 500 ka hatramin'ny 1000 miaraka amin'ireo lahatsoratra izay ezahinay hasiana laharana.